आइपिएल नखेल्ने चर्चित पाँच खेलाडी
आइपिएल नखेल्ने चर्चित पाँच खेलाडी आइपिएलमा केहि ठूला नाम भने देखिने छैनन् । कुनै अक्सनमा नबिक्दा र केहि व्यक्तिगत कारण यस सिजनको आइपिएल खेल्ने छैनन्
बुधबार, भदौ १७
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) विश्व क्रिकेटकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज टि२० लिग मानिन्छ । आइपिएल खेल्ने धेरै खेलाडीको सपना हुन्छ । आइपिएलमा खेलाडीले मूल्य र लोकप्रियता दुबै राम्रो पाउँछन् । फ्रेन्चाइज टि२० लिग एक मनोरञ्जन हो । यसले खेलाडीको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउछ । अक्सनमा सबै टोलीको आवश्कता एउटै हुन्छ भने खेलाडीले उच्च मूल्य पाउँछ । तर एक टोली बाहेक अन्यलाई आवश्यक छैन भने चर्चित खेलाडी सामान्य मूल्यमै अनुबन्ध हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अक्सनमा सबै खेलाडीले क्षमता अनुसारकै मूल्य पाउछन् भन्ने हुँदैन । चर्चित खेलाडी पनि नबिक्न सक्छन् ।
आइपिएलमा विश्वका ठूला नाम गरेका खेलाडीहरुको जमघट हुने गर्दछ । विश्वका चर्चित खेलाडीको जमघट, उच्च मूल्य, सार्वाधिक राषिको पुरस्कार, लोकप्रियता लगायत धेरै कुराले आइपिएल विश्वकै उत्कृष्ट फ्रेन्चाइज लिग हुन पुगेको छ । आइपिएल २०२० आगमी सेप्टेम्बर १९ देखि यूएईमा हुँदै छ । आइपिएल पहिलो पटक दर्शक विनाको रंगशालामा हुँदैछ । सबै फ्रेन्चाइज टोली यूएई पुगिसकेका छन् । टोलीमा रहेका केहि खेलाडी क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेलेर यूएई जाने छन् ।
इंग्ल्यान्ड र अष्ट्रेलियाका खेलाडी टि२० आई र ओडिआई सिरिजपछि जाने छन् । आइपिएलमा विश्वभरका चर्चित खेलाडी आफ्नो प्रर्दशन गर्न र देखाउन तयार छन् । समर्थक पनि आफ्ना आदर्श खेलाडीको प्रर्दशन हेर्न आतुर छन् । तर आइपिएलमा केहि ठूला नाम भने देखिने छैनन् । कुनै अक्सनमा नबिक्दा र केहि व्यक्तिगत कारण यस सिजनको आइपिएल खेल्ने छैनन् । आइपिएल २०२० नदेखिने पाँच चर्चित खेलाडी यस प्रकार छन् ।
५. मुस्ताफिजुर रहमान (तीव्र गतिका बलर)
बंगलादेशका २४ वर्षिय युवा बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर मुस्ताफिजुर रहमान आइपिएलमा देखिने छैनन् । सन् २०१६ मा सनराइजर्स हैदराबादलाई पहिलो पटक उपाधि जिताउन रहमानको योगदान उत्कृष्ट थियो । उनले सन् २०१६ मा सनराइजर्सबाट १६ खेलमा १७ विकेट लिदै ‘इमर्जिङ प्लेयर’ घोषित भएका थिए । आइपिएल इतिहासमा मुस्ताफिजुर एक मात्र इमर्जिङ प्लेयर घोषित हुने विदेशी खेलाडी हुन् । सन् २०१७ मा चोटका कारण एक मात्र खेल खेले । सन् २०१८ मा मुम्बईबाट ७ खेल खेलेका उनले ७ विकेट लिए । सन् २०१९ मा भने रहमानलाई बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले त्यसै वर्ष इंग्ल्यान्डमा हुने एक दिवसिय विश्वकपलाई ध्यानमा राख्दै नो अब्जेक्शन लेटर नदिँदा खेल्न पाएका थिएनन् । विश्व क्रिकेटमा उच्च प्रर्दशन गर्दै बंगलादेशबाट पहिलो रोजाईमा खेल्दै आएका रहमानले आफ्नो न्युनतम मूल्य १ करोड भारतीय रुपैयाँ तोकेपनि कसैले बोली लगाएनन् ।
४. मार्टिन गुप्टिल (ब्याट्सम्यान)
न्युजिल्यान्डका ओपनर मार्टिन गुप्टिल आक्रामक ब्याटिङका लागि विश्वभर चर्चित छन् । गुप्टिलले एकै ओभरमा खेललाई मोड्न सक्ने क्षमता राख्छन् । सीमित ओभरमा न्युजिल्यान्डका पहिलो रोजाईका ओपनर गुप्टिललाई यस सिजनमा हैदराबादले फुकुवा गरेको थियो । गतवर्ष हैदराबादको ओपनिङमा डेभिड वार्नर र जोनी बेयरस्टो उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेपछि गुप्टिलले मात्र ३ खेलमा मौका पाउँदा ८१ रन जोडेका थिए । यस सिजनमा पनि हैदराबादले वार्नर र बेयरस्टोलाई पहिलो रोजाईमा खेलाउने भएपछि फुकुवा गरेको थियो । अक्सनमा न्युनतम मूल्य १ करोड भारतीय रुपैयाँ राखेपनि अन्य टोलीले रुचि देखाएनन् । २ सय ५३ टि२० खेलमा ४ शतक र ४६ अर्ध शतक सहित ७ हजार ३ सय ८ रन बनाएका गुप्टिल बिक्न सकेनन् ।
३. जो रुट (ब्याट्सम्यान)
वर्तमान समयमा विश्व क्रिकेटमा तीनै शैलीका एक उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानका जो रुटले हालसम्म आइपिएल खेलेका छैनन् । इंग्ल्यान्डका पहिलो रोजाईका शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान रुट यो वर्ष पनि आइपिएलमा देखिने छैनन् । टोलीको आवश्कता अनुसार ब्याटिङ गर्ने रुटले अक्सनमा आफ्नो नामनै दिएका थिएनन् । इंग्ल्यान्डलाई गतवर्ष एकदिवसिय विश्वकप जिताउन महत्वपूर्ण प्रर्दशन गरेका रुटले टि२० खेलमा पनि उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । इंग्ल्यान्डबाट ३२ टि२० आई खेलेका रुटले १२६ को स्ट्राइक रेटमा कुल ८ सय ९३ रन बनाएका छन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन ९० रन छ । रुटका समर्थक र शुभचिन्तक आइपिलको जर्सीमा देख्न चाहान्छन् । तर रुटले आफ्नो नाम अक्सनमा दिएनन् ।
२. सकीब अल हसन (अलराउन्डर) बंगलादेशका अलराउन्डर सकीब अल हसन पनि यस सिजनको आइपिएलमा देखिने छैनन् । वर्तमान समयका सर्वोत्कृष्ट अलराउन्डर सकीब हाल एक वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध खेपिरहेका छन् । सकीबलाई सट्टेबाजको प्रस्तावबारे जानकारी नदिएर भ्रष्टाचार विरोधी संहिताको उंल्घन गरेको आरोपमा आइसिसीले गतवर्ष एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सकीबको प्रतिबन्ध अक्टोबर २९ मा सकिने छ । सकीब श्रीलंका भ्रमणमा बंगलादेशको टोलीमा पूनरागमन गर्ने तयारी गरि रहेका छन् । हैदराबादबाट आइपिएल खेल्ने सकीबलाई यस सिजनमा फुकुवा गरेको थियो ।
१. मिचेल स्टार्क (तीव्र गतिका बलर)
अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क यस पटकको आइपिएलमा देखिने छैनन् । योर्करका लागि माहिर स्टार्क आफ्नो तीव्र गतिको कारण समेत ब्याट्सम्यानलाई दबाबमा राख्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निरन्तर उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका स्टार्क वर्तमान समयका सवैभन्दा बढी तीव्र गतिमा बलिङ गर्ने बलर समेत हुन । स्टार्कले सन् २०१५ मा अन्तिम पटक रोयल च्यालेन्जर्स बेगलोरबाट आइपिएल खेलेका थिए । त्यसयता स्टार्क आइपिएलको जर्सीमा देखिएका छैनन् । स्टार्कलाई सन् २०१८ मा कोलकाता नाइट राइडर्सले अक्सनमा ९ करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेपनि चोटका कारण खेल्न पाएनन् । पूर्वनिर्धारित विश्वकपलाई विशेष तयारी गर्ने भन्दै यसपटक उनी अक्सनमा सहभागीनै भएनन् । जसको कारण स्टार्कको योर्कर र गती उनका समर्थकले आइपिएलमा देख्न पाउने छैनन् ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, भदौ १७, २०७७, ०४:०३:००